Wasiiro iyo xildhibaano qayb ka ahaa wafdigii madaxwayaha Soomaaliya oo kormeeray wakaaladda xoogga korontada ee Eneeye Bosaaso (sawiro) – PuntlandNews24
Wafdigii wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka dowladda faderaalka Soomaaliya ee dhowaan gaaray Puntland ayaa booqday wakaaladda xoogga Korontada Umadda ee Eneeye Bosaso oo ka mid ah adeegyadada qaranka ee wali shaqeynaya.
Wafdiga ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiir kuxigeenka amniga Cabdinaasir Siciid Muuse, Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi, xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise (Maas) iyo masuuliyiin kale.
Agaasimaha Eneeye Bosaaso Eng Guuleed Abshir Muuse ayaa ugu horayntii wafdiga ugu warbixiyay marxaladihii ay soo martay wakaaladda tan iyo dhisameedii 1987dii.
Waxaa uu sheegay wakaaladda inay soo martay marxalado kale duwan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib, waxaa uu xusay masuuliyiintii ay uga tagtay dowladdii dhexe ee marxuum Maxamed Siyaad Barre inay wali gacanta ku hayaan, halka kuwii dhigeeda ahaa ee laga hirgaliyay Koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga dalka aysan shaqayn.
Eng. Guuleed ayaa sheegay dad badan inay ku dhaawacmeen badbaadintii wakaaladda kuwaasi oo qaarkood geeriyooday iyo kuwa wali shaqeynaya, waxaana uu xusay inka badan sadex boqol oo dhalinyaro ah inay shaqo abuur ay u sameysay wakaaladda oo ay ka howlgalaan.
“Wakaalada waxaa ay bixisaa adeegyo koronto oo lacag la’aan sida waddooyinka, saldhigyada amaanka, isbitaalka wayn ee Bosaso oo qiimo dhimis wayn aan u samayno, goobaha cibaadada iyo waxbarashada” ayuu yiri agaasimaha oo intaasi ku daray in dhaqaale aad u badan ay bulshada kusoo celiso wakaaladda.
Xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay maamulka iyo shaqaalaha wakaaladda xoogga korontada umadda ee Eneeye.
Waxaa uu sheegay inay tahay wax lagu farxo oo mudan in lagu daydo sodon sano kahor hantii qaranka uu lahaa inay wali shaqaynayaan.
“Runtii waa wax lagu daydo badbaadidii hantida qaranka uu lahaa oo wali shaqaynaya, waxaana si gaar ah uga mahadcelinaynaa Eng Abshir Muuse oo waqti iyo dhaqaale uu isagu lahaa geliyay si’ay u hormarto” ayuu yiri xildhibaanka.
“Qoyska Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa oo halkii qof la qiyaasaa inuu biilo sideed ama sagaal, waana arrin farxad gooni ah xambaarsan inay maanta Eneeye ka shaqeynayaan boqolaal ah” ayuu yiri xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi.
Wasiir kuxigeenka amniga ee dowladda faderaalka Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa sheegay inay tani farriin u tahay badbaadinta hantida qaranka uu leeyahay, mar walba oo la ilaaliyona maalmo loo baxsan karo.
Waxaa uu ku amaanay maamulka wakaaladda xoogga korontada ee Eneeye masuuliyaddii ay iska saareen badbaadinta wakalaada iyo horumarinteeda, waxaana fariin uu u diray dadwaynaha inay xil iska saaraan badbaada hantida qaranka.
Eneeye ayaa ka mid ahayd mashaariic ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay fulisay, iyadoo taageero ka helaysa dowladda Danemark, waxaana adeegyo koronto ay ka bixisaa magaalooyinka Qardho iyo Bosaaso, kuwaasi oo ay ku jireen lacag la’aan goobaha danta guud ah.
Booqashada wafdigan ayaa kusoo beegmaysa xilli madaxwaynaha Soomaaliya uu dhowaan soo gaaray magaalada Bosaso uu doonayay inuu wakaaladda uu booqdo, balse markii dambe uu waqtiga ka dhacay safar uu ugu baxayay gobolada kale ee dalka, islamar ahaanataana uu masuuliyiintan usoo wakiishay inay booqdaan wakaaladda.
Madaxweyne Farmaajo "Dowladda Federaalka ah waxay dadaal dheer gelisay xasillinta deegannada Galmudug"